UCharles Darwin waqulunqa eli gama, kungekhona inkqubo
Ukukhethwa kwamalungiselelo yinkqubo yokuzalisa izilwanyana ngenxa yeempawu zabo ezinqwenelekayo ngaphandle komthombo ngaphandle kwendalo okanye ukhetho lwendalo. Ngokungafani nokukhethwa kwendalo , ukukhethwa kwamalungiselelo akukhethi kwaye kulawulwa yiminqweno yabantu. Izilwanyana, izilwanyana zasekhaya kunye nezilo zasendle ezisekuthunjweni, zihlala zixhomekeke ekukhetheni ngokuzikhethela ngabantu ukufezekisa i-pet yezilwanyana ezifanelekileyo ngokubhekiselele kwimibukiso kunye nokuziphatha okanye ukudibanisa kokubili.
Isazi senzululwazi uCharles Darwin kuthiwa uyingxenye yokukhethwa kwegama elithi "Kwimvelaphi yezilwanyana," eyabhala xa ebuya kwiiGalapagos Islands kunye nokuhlola iintaka ezihamba phambili. Inkqubo yokukhethwa kwezinto ezikhethiweyo yayisetyenziswe iminyaka emininzi ukudala imfuyo kunye nezilwanyana ezizalwe yimfazwe, ezolimo kunye nobuhle.
Ngokungafani nezilwanyana, abantu abavame ukufumana ukhetho lokuzikhethela njengabantu abaqhelekileyo, nangona imirhumo edibeneyo ingatshatyalaliswa njengomzekelo wolu hlobo. Nangona kunjalo, abazali abacebisayo imitshato ngokuqhelekileyo bakhetha iqabane labo ngenxa yentsholongwane yemali kunokuba bafumane impawu zobomi.
UDarwin wasebenzisa ukukhethwa kwamalungiselelo ekuncedeni ukuqokelela ubungqina ukuze achaze indlela yakhe yokuziphendukela kwemvelo xa ebuyela eNgilani esuka e-Galapagos Islands kwiHMS Beagle .
Emva kokufunda iifumba kwiziqithi, iDarwin yajika yaba iintaka ezizalisayo-ngokukhethekileyo amajuba-ekhaya ukuze azame ukubonakalisa izimvo zakhe.
UDarwin wayekwazi ukubonisa ukuba unokukhetha ukuba yiziphi iimpawu ezinqwenelekayo kumajuba kunye nokwandisa amathuba abo ukuba adluliselwe kwinzala yabo ngokuzalisa amajuba amabili ngomlinganiselo; ukususela ngoDarwin wenza umsebenzi wakhe ngaphambi kokuba uGregor Mendel ashicilele iziphumo zakhe kwaye wasungula indawo ye-genetics, le nto yayiyinxalenye ephambili kwi-puzzle ye-theory.
UDarwin waxela ukuba ukhetho lwendalo kunye nokhetho lwendalo lusetyenziswa ngendlela efanayo, apho iimpawu ezinqwenelekayo zanikela abantu ithuba: Abaya kusinda babephila ixesha elide ngokwaneleyo ukuba badlulise iimpawu ezinqwenelekayo kwintsapho yabo.
Imizekelo Yanamhlanje neyeMandulo
Ukusetyenziswa okugqithiseleyo kokukhethwa kwezinto ezibonakalayo kukuzaliswa kwezinja-ezivela kwiimpisi zasendle eziphumelele kwiqela le-American Kennel Club, eliqaphela iintlobo ezingaphezu kwe-700 zeentaka.
Uninzi lweentlobo ze-AKC eziqaphelayo ziphumo zendlela yokukhetha yokwenza izinto eyaziwa njenge-crossbreeding apho inja yindoda evela kumnye umtshato kunye nenja yowesifazane yolunye uhlobo ukudala i-hybrid. Omnye umzekelo woluhlobo olutsha luyi-labradoodle, inhlanganisela ye-Labrador retriever kunye ne-poodle.
Izinja, njengeentlobo, zinika umzekelo wokukhetha okukhethiweyo. Abantu basendulo babeninzi ngamadada abahamba ngeendawo, kodwa bafumanisa ukuba xa babelana ngokutya kwabo ngeengcuka zasendle, iimbongolo zaziza kuzikhusela kwezinye izilwanyana ezilambileyo. Iindlovu ezineendawo zokuhlala zasekhaya zazaliswa kwaye, ngaphezu kwezizukulwana eziliqela, abantu bahlakulela izimpungushe kwaye baqhubeka bezalisa abo babonisa isithembiso esiphezulu sokuzingela, ukukhuselwa kunye nothando.
Iimpisi ezifuywayo zazikhethwa ngokukhethwa kwintlobo kwaye zaba ziintlobo ezintsha abantu abazibiza njengezinja.
IiDinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala zaseJamani
Ziziphi izilwanyana eziqhelekileyo zisebenzisa i-Camfifing Bene Benefit
10 Izixazululo eziphelileyo
Indlela yokuphelisa iMouse Smell In Corvette yakho
Yintoni ongayilindela xa ubhalisela izifundo zeGalofu
3 Iindlela ezahlukeneyo zokudlala i-E7 Guitar Chord
Inkqubo yokuHlola yokuHlola
Iingxelo ezi-9 zokuvulwa kweBhayibhile yeSathana